Schwangau Allgäu, indawo yokuhlala eSchluttenhofer - I-Airbnb
Schwangau Allgäu, indawo yokuhlala eSchluttenhofer
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguOttmar
Indlu entsha yosapho olunye eneflethi kwindawo ezolileyo. Ifulethi elinebalcony kunye nenxalenye yegadi. Ukupaka kwindawo yokuhlala. Ukutyibiliza kumhlaba onqumlayo ubaleka ngasekunene kwendlu, imizuzu embalwa ukuya eForggensee nakumbindi wedolophu. Kubandakanywa nerhafu yabakhenkethi.
Indlu entsha yosapho olunye eneflethi kwindawo ezolileyo. Ifulethi elinebalcony kunye nenxalenye yegadi. Ukutyibiliza kumhlaba onqumlayo ubaleka ngasekunene kwendlu, imizuzu embalwa ukuya eForggensee nakumbindi wedolophu.
Kwigumbi elingaphantsi kwendlu ye-Anjas Frisuren (i-hairdressing salon), i-1st Sup Yoga Indoor Studio kumazantsi eJamani kunye neebhodi ze-Yoga zangaphakathi ezivela eStrobel & Walter esuka eWürzburg. U-Anja Wiegland oqinisekisiweyo we-yoga utitshala 200H / AYA, Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Yoga ngokutsho Yesudian, ukususela ngoJulayi 2018 Yin Yoga 60H / AYA, Sup Yoga Teacher 40H, Sup Yoga Ngaphandle. Isikhululo sokurenta i-Sup, intengiso, i-yoga, i-guide guided, i-Sup Lounge, ngqo kwi-Forggensee, i-Schwangau yesithili sase-Brunnen. Kwisikhululo saseBannwaldsee. Ulwazi kunye nobhaliso kwi-sup-forggensee.de.
Umbuki zindwendwe ngu- Ottmar
Ndisoloko ndifumaneka ngolwazi kunye nemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Schwangau